ထိပ်တန်း 10 အန်းဒရွိုက်သည်အကောင်းဆုံးသူလျှို Apps ကပ
တိကျသောလူတစ်ဦးဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုခြေရာခံသိမ်းထားချင်? လျှို့ဝှက်စွာ pics နှင့်စံချိန်ဗီဒီယိုများဖမ်းယူ? မိမိအပစ္စုပ္ပန်တည်နေရာကဘာလဲ? သူကသင်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောမျိုးဘာမှမှမှန်? ဟုတ်ကဲ့, သင်သည်လက်ျာအရာတွေအကြောင်းဖတ် “အဆိုပါသူလျှို Apps ကပ”.
10 အန်းဒရွိုက်သည်အကောင်းဆုံးသူလျှို Apps ကပ
Works like the Hidden Camera app. With Sneaky Cam on you can set any image as background. And now taping on any part of the screen clicks images for you. ဟုတ်ကဲ့, perfectly executed task of spying anyone you wish to.
GROUNDHOG နေ့ 2017 quote, ပုံရိပ်တွေ, ဆောင်ပုဒ်, wiki, အရိပ်
GROUNDHOG နေ့ 2017 quote, ပုံရိပ်တွေ, ဆောင်ပုဒ်, wiki, အရိပ် »